Mac တွင် နေရာလွတ်လုပ်နည်း | ငါ mac ကပါ။
သင်၏ Mac တွင်နေရာလွတ်မည်သို့ရနိုင်မည်နည်း
Ignatius ခန်းမ | | Mac OS X ကို, လဲ tutorial
cloud သိုလှောင်မှုပလပ်ဖောင်းများသည် ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှ၊ လိုအပ်သော သန်းပေါင်းများစွာသော သုံးစွဲသူများက အသုံးပြုခဲ့ကြသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် လက်ရှိတွင် ထုတ်လုပ်သူများ မည်သို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ကြသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ စစ်ဆေးအတည်ပြုထားပါသည်။ သိုလှောင်မှုနေရာအလွန်နည်းပါးသည်။ သူတို့ရဲ့အသင်းတွေပေါ်မှာ။ Apple သည် အများအားဖြင့် ၎င်း၏လမ်းကြောင်းကို ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် လိုက်နေသော်လည်း ၎င်းသည် လုပ်ငန်း၏ ပုံမှန်လမ်းကြောင်းကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။
အကယ်၍ သင့်ကွန်ပြူတာ ပုံမှန်ထက် နှေးကွေးနေပါက၊ ၎င်းသည် အကြောင်းရင်းနှစ်ခုကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်- သင်သည် ၎င်းကို ဖော်မတ်မချဘဲ အချိန်အတော်ကြာအောင် ဖော်မတ်မချဘဲ သက်ဆိုင်ရာ macOS ဗားရှင်းကို အစမှ ပြန်လည်ထည့်သွင်းထားခြင်း သို့မဟုတ် သင့် hard drive တွင် နေရာလွတ်ကုန်နေပါသည်။ အကြောင်းပြချက်က နေရာလွတ်မရှိရင်၊ ဒီဆောင်းပါးမှာ မင်းကိုငါပြမှာမို့လို့ မင်း မှန်ကန်တဲ့ ဆောင်းပါးကို ရောက်နေပြီ။ သင်၏ Mac တွင်နေရာလွတ်မည်သို့ရမည်နည်း.
ကံမကောင်းစွာပဲ၊ Mac တွင် နေရာလွတ်လုပ်ပါ။ ၎င်းသည် အက်ပ်များကို ဖျက်ပစ်ရန် မဆိုလိုပါ။သို့သော် စနစ်သည် နေရာမည်မျှယူသည်ကို စစ်ဆေးခြင်း ပါဝင်သည်။ Windows နှင့်မတူဘဲ macOS သည် ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းသည့် အပလီကေးရှင်းများမှ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားသော အကြောင်းအရာများကို အလွန်ကွဲပြားသောနည်းလမ်းဖြင့် စီမံခန့်ခွဲပါသည်။
Windows သည် သုံးစွဲသူအား ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သော အကြောင်းအရာကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် မည်သည့် folder တွင်မဆို၊ အထူးသဖြင့် ဂိမ်းများနှင့်ပတ်သက်လာသောအခါတွင်၊ အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခု၏ နောက်ထပ်အကြောင်းအရာများ... macOS တွင်၊ ၎င်းသည် သိမ်းဆည်းရန် တာဝန်ရှိသော စနစ်ဖြစ်သည်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ ၎င်းသည် အသုံးပြုသူအား သိမ်းဆည်းလိုသည့်နေရာတွင် မဟုတ်ဘဲ စနစ်ပေါ်တွင် ပြုလုပ်သည်။ ဒီနည်းနဲ့ အက်ပလီကေးရှင်းကို ဖျက်တဲ့အခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်း၏အကြောင်းအရာအားလုံးကို မဖျက်သော်လည်း အပလီကေးရှင်းကိုသာ ဖျက်ပါ။. ကျွန်ုပ်တို့ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်သော နောက်ထပ်အကြောင်းအရာအားလုံးသည် စနစ်ထဲတွင် ရှိနေပါမည်။
နမူနာအတွက် ခလုတ်တစ်ခု။ အထက်ပါပုံတွင် ကျွန်ုပ်၏ Mac ၏ System အပိုင်းကို မည်သို့မြင်နိုင်သည်၊ အလွန်ကောင်းမွန်သော 140 GB ကို သိမ်းပိုက်ထားပြီး၊ ကျွန်တော် 20 GB သာ လျှော့ချနိုင်ခဲ့သည့် နေရာ၊လက်တွေ့နှင့် ချိန်ညှိထားသည်ထက် ပိုသော နေရာပမာဏ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပြူတာတွင်ထည့်သွင်းထားသော application များအားလုံးသည် system တွင်သိမ်းဆည်းထားသည့်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲမည်မဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့် Mac တွင်နေရာလွတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ပထမဆုံးလုပ်ဆောင်ရမည့်အရာမှာ ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးမပြုတော့သော အက်ပ်များကို ဖယ်ရှားပါ။.
1 Mac ပေါ်ရှိ အက်ပ်များကို ဖယ်ရှားနည်း
1.1 1 နည်းလမ်း
1.22နည်းလမ်း
1.33နည်းလမ်း
1.44နည်းလမ်း
2 macOS အတွက်စနစ်၏အရွယ်အစားကိုလျှော့ချဖို့ဘယ်လို
2.1 Disk စာရင်း X
Mac ပေါ်ရှိ အက်ပ်များကို ဖယ်ရှားနည်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ပေါ်တွင် အပလီကေးရှင်းများနှင့် macOS နှင့် စနစ်က နေရာမည်မျှရှိသည်ကို စစ်ဆေးရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် လိုအပ်ပါသည်။ ပန်းသီးကိုနှိပ်ပါ။ ထိပ်တန်းမီနူးတွင်ပြသထားသည် (မည်သည့်အက်ပ်ကိုဖွင့်ထားသည်ဖြစ်စေ ဤမီနူးကိုပြသထားသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ဖွင့်ထားသည်မှာ အရေးမကြီးပါ)။
ထို့နောက်အရောင်တင်သည် ဒီ Mac အကြောင်း နှင့် အပေါ်ဆုံးပုံ ပေါ်လာလိမ့်မည်။ အပလီကေးရှင်းအားလုံး၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန်နှင့်တစ်ခုစီတစ်ခုစီတွင်နေရာမည်မျှနေရာယူထားသည်ကိုစစ်ဆေးရန်၊ ကိုနှိပ်ပါ။ စီမံခန့်ခွဲ.
ထို့နောက်တွင်၊ macOS သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကျွန်ုပ်တို့အား ပြိုကွဲသောနည်းဖြင့် မြင်နိုင်သော ဝင်းဒိုးတစ်ခုကို ပြသလိမ့်မည်၊ နေရာဘယ်လောက်ယူကြလဲ။:
အ applications များ ကျွန်ုပ်တို့တပ်ဆင်ထားသည်။
အ စာရွက်စာတမ်းများ ကွန်ပြူတာမှာ သိမ်းထားပါတယ်။
အပလီကေးရှင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့ရှိနေသည့် ဓာတ်ပုံများ၏ မိတ္တူဖြင့် နေရာယူထားသည်။ ဓါတ်ပုံများ iCloud သုံးလျှင် သို့မဟုတ် iCloud အသုံးမပြုပါက ဓာတ်ပုံများအားလုံးကို စီမံခန့်ခွဲရန် Photos အက်ပ်ကို အသုံးပြုပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် ဒေါင်းလုဒ်ဖိုင်များဖြင့် သိမ်းပိုက်ထားသော နေရာလွတ်များလည်း ရှိပါသည်။ iCloud တွင်ရနိုင်သည်။
မေးလ် အပလီကေးရှင်းက နေရာလွတ် စာပို့.
အပလီကေးရှင်းဖြင့် သိမ်းပိုက်ထားသော နေရာ ပို့စ်များကို
အတွင်းရှိ ဖိုင်များအားလုံး သိမ်းပိုက်ထားသော အရွယ်အစား ကျီငယ်.
လိုချင်ရင် ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac တွင် ထည့်သွင်းထားသော အက်ပ်များကို ဖျက်ပါ။ နေရာလွတ်ဖို့ ကျွန်ုပ်တို့တွင် နည်းလမ်း ၄ ခုရှိသည်။
အပလီကေးရှင်းတစ်ခုစီမှ နေရာယူထားသော အပိုင်းကို ပြထားသည့် အပိုင်းမှ ကျွန်ုပ်တို့ ရပါမည်။ လျှောက်လွှာကိုနှိပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ ဖျက်လိုသော အရာကို နှိပ်ပါ။ ကိုဖယ်ရှား.
ဤနည်းလမ်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပြူတာတွင် install လုပ်ထားသော မည်သည့် application မဆို၎င်းတို့သည် စနစ်အက်ပ်များမဟုတ်သရွေ့ Mac App Store မှ လာသည်ဖြစ်စေ ၊
ကျွန်ုပ်တို့သည် Finder ကိုဖွင့်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ဖယ်ရှားလိုသော application ကိုနှိပ်ပါ။ အမှိုက်ပုံးထဲ ဆွဲထည့်တယ်။.
ကျွန်ုပ်တို့သည် Application Launcher ကိုဖွင့်ပြီး ဘယ်ဘက်မောက်စ်ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီး ဖိထားပါ။ အက်ပ်ကို အမှိုက်ပုံးသို့ ဆွဲယူပါ။
ဤနည်းလမ်းသည် တရားဝင် Apple အပလီကေးရှင်းစတိုးမှ ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းထားသော အပလီကေးရှင်းများဖြစ်သရွေ့ ဤနည်းလမ်းသည် တရားဝင်သည်။၎င်းသည် Mac App Store မှဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Application Launcher ကိုဖွင့်ပြီး မည်သည့်အပလီကေးရှင်းတွင်မဆို ဘယ်ဘက်မောက်စ်ခလုတ်ကို ဖိထားပါ။ အကအခုန် y အိုင်ကွန်၏ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင့်တွင် X ကိုပြသပါ။
ဤနည်းလမ်းဖြင့် အက်ပ်တစ်ခုကို ဖျက်ရန်၊ အက်ပ်များ ကခုန်သည်နှင့်၊ X ကိုနှိပ်ပါ အိုင်ကွန်၏ ဘယ်ဘက်ထိပ်တွင် ပြသထားသည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြဿနာကို တွေ့ရှိသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ hard drive တွင် နေရာပိုမလွတ်နိုင်ပါ။ စနစ်အပိုင်း၏အရွယ်အစားApple သည် ထိုနေရာကို ဖယ်ရှားနိုင်စေရန် မည်သည့် application ကိုမှ မပေးသောကြောင့် ပြင်ပမှ အပလီကေးရှင်းများကို အသုံးပြုရန် ကျွန်ုပ်တို့ ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဤအပလီကေးရှင်းများကို အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်ပါသည်။ ကွန်ပြူတာကျွမ်းကျင်မှု အနည်းဆုံးရှိရမည်။ကွန်ပြူတာ၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် တည်ငြိမ်မှုကို မထိခိုက်စေဘဲ ကျွန်ုပ်တို့ သိထားသမျှအားလုံးကို ဖျက်ရန် စနစ်ထဲသို့ ကျွန်ုပ်တို့ ဝင်ရောက်တော့မည်ဖြစ်သောကြောင့်၊
အဲဒီ အသိပညာ မရှိဘူး ဆိုရင်macOS မှ ရယူထားသော စနစ်နေရာလွတ်ကို ဖယ်ရှားရန် အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့ ထည့်သွင်းလေ့ရှိသည့် အပလီကေးရှင်းအားလုံးကို ဖော်မတ်လုပ်ပြီး ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန်ဖြစ်သည်။ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်က သင်ထင်ထားတာထက် အများကြီးပိုမြန်ပါတယ်။
Disk စာရင်း X
Disk Inventory X သည် စနစ်အတွင်း၌ ကျွန်ုပ်တို့အား စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် ခွင့်ပြုမည့် လုံးဝအခမဲ့ အက်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖိုင်များနှင့် လမ်းညွှန်တစ်ခုစီမှ သိမ်းပိုက်ထားသော နေရာအား ကျွန်ုပ်တို့အား ပြသပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပြူတာတွင် ထည့်သွင်းခြင်းမပြုတော့သော အပလီကေးရှင်းများ၏ အကြောင်းအရာကို ခွဲခြားသိမြင်နိုင်စေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ရှိသည်။
လျှောက်လွှာ interface ကို ဒါဟာအတိအကျမရိုးရှင်းပါဘူး။ဒါပေမယ့် အဲဒါအတွက် အချိန်တစ်ခုလောက် မြှုပ်နှံထားမယ်ဆိုရင် အဲဒါကို အပြည့်အဝ အခွင့်ကောင်းယူပြီး Apple က System ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့ အကြောင်းအရာအားလုံးကို ဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပေမယ့် အဲဒါက တကယ်ပဲ ကျွန်တော်တို့ အသုံးမပြုတော့တဲ့ Application တွေရဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပြူတာမှဖယ်ရှားခဲ့သည်။
Disk Inventory X အက်ပ်ကို သင့်အတွက် ရနိုင်ပါသည်။ လုံးဝအခမဲ့ download လုပ်ပါ ၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်.
DaisyDisk သည်ကျွန်ုပ်တို့လက်ထဲတွင်ရှိနေသည့် နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့၏ စနစ်အား သိမ်းပိုက်ထားသော နေရာများကို ဖယ်ရှားပါ။. ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ပိုမိုသတိထားရမည့် အင်တာဖေ့စ်ကို ပေးဆောင်သော်လည်း၊ ရလဒ်မှာ အတူတူပင်ဖြစ်သောကြောင့်၊ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား စနစ်ဖိုင်တွဲများကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး ၎င်းတို့၏ အကြောင်းအရာအားလုံးကို ဖျက်ပစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
DaisyDisk ကို ၁၀.၉၉ ယူရိုဖြင့်စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားသည် ထိုသို့ရရှိနိုင်ပါသည် ၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်. ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအပလီကေးရှင်းကိုလုံးဝအခမဲ့စမ်းသုံးနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Disk Inventory X ကိုရှင်းလင်းစွာမသိပါက၊ ဤအပလီကေးရှင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပိုမိုသင့်လျော်မှုရှိမရှိကြည့်ရှုနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » သင်၏ Mac တွင်နေရာလွတ်မည်သို့ရနိုင်မည်နည်း
2012 နှစ်လယ်ပိုင်းမှ MacBook Pro ကို Apple မှ Vintage အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။
Mactracker သည် MacBook Pro အသစ်များနှင့် အမှားပြင်ဆင်မှုများကို ထည့်သွင်းမွမ်းမံထားသည်။